Degso NX Studio loogu talagalay Windows
Degso NX Studio
Bilaash Degso loogu talagalay Windows (231.65 MB)
Degso NX Studio,
NX Studio waa barnaamij faahfaahsan oo loogu talagalay in lagu arko, lagu socodsiiyo laguna tafatiro sawirrada iyo fiidyowyada lagu qaaday kamaradaha dhijitaalka ah ee Nikon.
Isku-darka awoodaha sawir-qaadista iyo fiidiyaha ee ViewNX-i oo leh sawir-qaadista iyo aaladaha dib-u-habeynta ee Qabashada NX-D ee hal shaqo oo dhammaystiran, NX Studio wuxuu bixiyaa qaloocyada codka, dhalaalka, hagaajinta isbarbardhigga, oo aad ku dabaqi karto oo keliya RAW laakiin sidoo kale JPEG/TIFF qaabka faylka sawirka. Waxaa ku jira qalab tafatir. Waxay kaloo bixisaa astaamo kala duwan oo loogu talagalay shaqooyinka sida tafatirka xogta XMP/IPTC, maareynta jadwalka hore, daawashada khariidadaha muujinaya goobaha toogashada ee ku saleysan xogta goobta lagu daray sawirrada, iyo gelinta sawirrada internetka.
Soo dejiso NX Studio
Daawashada Sawirrada: Waxaad ku arki kartaa sawirrada muuqaalka thumbnail oo si dhakhso leh u hel sawirka aad rabto. Sawirada la xushay waxaa lagu arki karaa cabbir ka weyn hal jir si loo hubiyo faahfaahinta ganaaxa. Waxa kale oo jira ikhtiyaarro qaab-dhismeedyo badan leh oo loo adeegsan karo isbarbardhigga sawirrada dhinac-dhinac. Waxa kale oo aad isbarbar dhigi kartaa aragtida hore iyo ka dib ee isla sawirka si loo qiimeeyo saamaynta hagaajinta.
Shaandheeyeyaasha: Sawirrada waxaa lagu sifeyn karaa qiimeyn iyo sumad. Si dhakhso ah u hel sawirrada aad rabto si aad u hesho hawl socod aad u hufan.
Hagaajinta Sawirada: Sawirrada waxaa loo wanaajin karaa siyaabo kala duwan, oo ay ka mid yihiin hagaajinta iftiinka, midabka, iyo goobaha kale, goosashada sawirrada ama ka shaqaynta sawirrada RAW, iyo in lagu keydiyo natiijooyinka qaabab kale.
Sawirada Dhoofinta: Sawirada la xoojiyay ama la cabbiray ayaa loo dhoofin karaa qaabka JPEG ama TIFF. Sawirada la dhoofiyay ayaa markaa la furi karaa iyadoo la isticmaalayo software kale.
U -soo -gelinta Sawirrada Internet -ka: Ku -dheji sawirrada NIKON IMAGE SPACE ama YouTube.
Daabac: Sawirro daabac oo sii saaxiibbada iyo qoyska.
NX Studio waxaa loo isticmaali karaa oo kaliya inaan kor u qaadno sawirrada, laakiin sidoo kale si loo tafatiro fiidiyaha. Xogta goobta ee ku jirta sawirrada waxaa loo isticmaali karaa in lagu arko goobaha toogashada ee khariidada.
Tafatirka Fiidiyowga (Tifaftiraha Filimka): Iska jar kaydka aan la rabin ama isku duub cajaladaha.
Xogta Goobta: Xogta goobta ee lagu daray sawirrada waxaa loo isticmaali karaa in lagu arko goobaha toogashada ee khariidada. Sidoo kale soo dejiso qoraallada waddooyinka oo ku dar xogta goobta sawirrada.
Bandhigyada Slide -ka: U fiirso sida tusmada sawirrada ee faylka la xushay.
Kaamirooyinka dhijitaalka ah ee la taageero
Z 7, Z 7II, Z 6, Z 6II, Z 5 iyo Z 50
Dhammaan kamaradaha SLR -ta Nikon ee SLR laga bilaabo D1 (la sii daayay 1999) illaa D780 (oo la sii daayay Janaayo 2020) iyo D6
Dhammaan kamaradaha Nikon 1 laga bilaabo V1 iyo J1 (oo la sii daayay 2011) illaa J5 (oo la sii daayay Abriil 2015)
Dhammaan kamaradaha COOLPIX iyo COOLPIX P950 laga bilaabo COOLPIX E100 (oo la bilaabay 1997) illaa moodellada la sii daayay Ogosto 2019
KeyMission 360, KeyMission 170 iyo KeyMission 80
Qaababka faylka ee la taageeray
Sawirrada JPEG (Exif 2.2–2.3 waafaqsan)
Sawirrada NEF/NRW (RAW) iyo TIFF, MPO qaababka 3D sawirrada, filimada, maqalka, Xogta Boodh -ka -xoqidda xogta xogta dib -u -ciyaarista, iyo dhererka iyo xogta log -ka qoto dheer oo lagu abuuray kamaradaha dhijitaalka ah ee Nikon
NEF/NRW (RAW), TIFF (RGB) iyo JPEG (RGB) iyo MP4, MOV iyo AVI filimada lagu abuuray software Nikon
NX Studio Noocyada
Cabirka Faylka: 231.65 MB
Horumar: Nikon Corporation
Wararkii Ugu Dambeeyay: 02-09-2021
Pixlr waa software tafatir sawir oo kuu oggolaanaya inaad abuurto sawirro aad u qurux badan sida ku...
NX Studio waa barnaamij faahfaahsan oo loogu talagalay in lagu arko, lagu socodsiiyo laguna...
KMPlayer waa ciyaartoy warbaahineed oo awood leh oo bilaash ah oo leh astaamo horumarsan oo loogu...
MyPaint waa tifaftire sare oo sawir leh oo loogu talagalay rinjiyeyaasha dijitaalka ah. Tifatiraha,...
Barnaamijka aad rabto inaad soo dejiso waa laga saaray maxaa yeelay wuxuu ku jiraa virus. Haddii...
myTube waa codsi aad u shaqeynaya Windows 8.1 halkaas oo aad ka daawan karto fiidyowyada YouTube...
Sida magaca ka muuqata, Easy Video magaabay waa video editor ah oo aad u isticmaali karto si loo...